Shaqadii Garoonka Muqdisho oo la joojiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Shaqadii Garoonka Muqdisho oo la joojiyay
Hadda buuq ayaa ka taagan yahay gudaha Garoonka, waxaana xayiran boqolaal qof oo rakaab ah oo maanta aadi rabay gobollada dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkadaha diyaaradaha ayaa maanta sameeyay shaqo-joojin, kadib markii dowladda ay mid kamid ah diyaaradaha ay shaqada ka joojisay, qaarna u diiden inay ka shaqeeyaan degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Lama oga sababta ay dowaldda tallaabadan ugu dhaqaaqday. Boqolaal qof oo saakay ku qornaa inay u duulaan magaalooyinka dalka Soomaaliya ayaan bixin, iyagoo ku xayiran gudaha Garoonka.
Dibadbax ashtako ah ayaa shaqaalaha Shirkadda maamusha Garoonka ee Favori LLC ka wadeen maalihii lasoo dhaafay gudaha iyo banaanka, iyadoo ka cabanaya shaqaalo badan oo si aan munaasab ahayn loo eryay.
Wasiirka duulista Maxamed C/llaahi Oomaar ayaa lagu eedeeyay inuu kawado Garoonka qaraabo-kiil iyo nin-jeclaysi, iyagoo shaqada ka saarey dadkii horey u joogey, kuna bedelaya kuwa beeshiisa Ogaadeen kasoo jeeda, oo xilal sare iyo kuwa hoose u dhiibay.
Sidoo kale, Shirkadda Favari oo muddo dheer gacanta ku haysa howlaha Garoonka ayaa iyaduba qeyb ka ah musuq-maasuqa socda, waxayna Turkiga ka keentay shaqaale badan, oo howsha muwaadiniinta Soomalaiyed qabanayeen lagu wareejiyay.
Favori LLC waxay gudaha Garoonka ka dhisatay goobo ganacsi, oo uu kamid yahay hotel wayn, oo ay degan yihiin diblomaasiyiin iyo madaxda dowladda, maadaama meel amni ah ka dhisan yahay, waxaana laga soo wareegtay inta badan huteelladii banaanka ku yaallay.